Xog: Ciidamadda Dowladda Oo Baneeyay Difaacyadii Goboladda Shabeelooyinka, Sababta? – Hornafrik Media Network
Xog: Ciidamadda Dowladda Oo Baneeyay Difaacyadii Goboladda Shabeelooyinka, Sababta?
Ciidamadda Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa billaabay inay dib uga soo gurteen Difaacyo Istaraatiiji ah oo ay Muddo daganaayeen, kadib markii ay waayeen Mushaaraadkii ay Xaqa u lahaayeen.
Siday Ogaatay HornAfrik waxaa taagan Qalqalkii ugu waynee ee dhinaca Ciidanka ah, kadib markii ay Ciidanku baneeyeen Deegaanka Bariire, Degmadda Baraawe, iyo Qaybo kale oo Shabeelaha Hoose ka mida, Waxaana Ciidankii Milatariga ee joogay Degmadda Baraawe ay badankood ka soo ruqaansadeen Saldhigyaddii ay ku lahaayeen halkaasi, iyagoo hadda ku sugan meel Duleedka Baraawe ah. Waxaana socda Dadaalo la doonayo in lagu qanciyo inaysan halkaasi ka soo bixin.
Ciidamadda Milatariga ee ku sugan Baraawe waxaysan qaadan wax Mushaar ah Muddo 2 Sanno ah, kadib markii cunaqabatayn dhaqaale ay saareen Dowladdii ay ka difaacayeen Cadowga Alshabaab. Waxaana haatan ay isku diyaariyaan Guutadda halkaasi joogtay oo uu Madax u yahay Gen Labo Afle inay gabi ahaanba soo baneeyaan Gobalka Shabeelaha Hoose.
Sidoo kale Gobolka Shabeeladda Dhexe ayaa Ciidamaddii Milatarigii ahaa ee ku sugnaa waxay xirteen Wadada u dhaxaysa Muqdisho illaa iyo Balcad, iyagoo ka soo baxay dhamaan difaacyaddii ay Gobalkaasi ku lahaayeen, kadib markii iyagana aysan helin wax mushaaraad ah muddo ku dhow 1 sanno. Waxaana u tagay Ciidankaasi Saaka Abaanduulaha Ciidanka Xoogga, Gen Caanood oo isku dayaya inuu ku qanciyo inay furaan Wadadaasi, dibna ugu laabtaan Saldhigyadoodii, balse illaa iyo hadda laguma guulaysan in lagu qanciyo inay ku laabtaan Xarumahoodii, iyagoo aan la siin Mushaaraadkoodii.
Shidaalka iyo Rasaasta loogu talagalay Ciidanka ayaa Muqdisho looga iibiyaa Ganacsato, kuwaasoo ay suuragal tahay inay u sii gudbaan Kooxda Alshabaab, Waana caqabada ugu wayn ee haysata Ciidamadda Difaacyadda ku jira oo aan haysan Saanad Milatari, isla markaana u babac dhigi karin Maleeshiyaadka Alshabaab oo ka hub iyo Qalab badan.
Kooxda La Socodka Cunaqabataynta Hubka Soomaaliya ayaa horay ugu eedaysay Dowladda Federaalka Somalia inaysan xakamayn karin Hubka gacanteeda ku jira, Waxaana la helay Raadad badan oo muujinaya Hub iyo Qalab loogu deeqay Dowladda oo u gacan galay Kooxda Alshabaab.
Howlgalka AMISOM ayaa iyaguna dhinacooda sidaas oo kale lagu eedeeyay inay gataan Rasaasta iyo Shidaalka, Waxaana Dowladda Somalia laftigeedu ay mar qabatay Shidaal iyo Qalab Ciidan oo laga iibsaday AMISOM.
Ciidamadda ku sugan Goboladda Somalia ee ka tirsan Milatariga ayaa Weeraro kala kulma Maleeshiyaad Alshabaab ah oo aad u hubaysan, iyagoo aan haysan Rasaas iyo Saanad ku filan, Waxayna taasi sababtaa inay u babac dhigi waayeen Maleeshiyaadkaasi oo ay suuragal tahay inay isticmaalayaan Saanaddii loogu talagalay Ciidanka oo si Musuq Maasuq ah looga iibsaday.
Ka bixitaanka Ciidanka ee Deegaano Istaraatiiji ah ayaa imaanaysa Maalin kadib markii ay iscasileen Wasiirkii Gaashaandhiga iyo Taliyihii Ciidanka Xoogga, taasoo sii niyad jabisay Ciidamadda Kaynta Difaacyadda uga jiray, iyagoo aan haysan Xuquuq.
Wasaaradda Gaashaandhiga Soomaaliya hadda ma lahan Wasiir, Walina Xittaa Xukuumaddu ma cadayn cidda Ku Sime noqonaysa Wasiir Ku Xigeenka iyo Wasiiru Dowlaha Gaashaandhiga, Sidoo kale Taliyaha Ciidanka Xoogga ee cusub wali lama wareegin Xilka, Waxaana hor yaala Caqabado adag oo la xiriira Howlaha Ciidanka, isagoo aan faham ka haysan hadda Ciidanka ay Soomaaliya leedahay.